35 Ruux oo Somali ah oo ay Booran ku dishay Aaga tuulada Salaxaad iyo Degmada Laga Hide – Rasaasa News
Oct 31, 2009 boran, Ogaden, oromo, Somali
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Jijiga ayaa waxay tibaaxayaan in dad hubaysan oo Booran ah ay werar ku qaadeen dad Somali ah oo degan, degaano u dhaw Tuulada Salaxaad iyo Degmada Laga hido.
Waxaa baryahanba ay xasaradi ka dhex taagnayd labada qoomiyadood ee Somalida iyo Booran, waxaana todobaadkii hore ay dagaal fooda isku dareen baadiyaha degmada Laga hido, waxaana halkaas ku dhintay saddex ruux oo Somali ah iyo todoba ruux oo Booran ah.
Sidda ay wararku sheegayaan, waxaa xasarada bilaabay baa la leeyahay xubno ka tirsan ciidanka kooxda Jwxo-shii oo baryahan dambe u wareegay dhinaca gabalada Nogbeed ayaa laba nin oo Boran ah ku dilay aagaas, dabadeedna Booranta ayaa bilowday in ay layso dad Somali ah.
Dhibaatadan shalay dhacday ee Somalida loo gaystay, ayaanay jirin cid haba yaraatee ka hadashay, hadii ay noqon lahay dhinaca Kaalinka 5aad Somalida ama dhinaca maamulka Boran, waxaa kale oo aan jirin dad is xilqaamay oo ka socda labada dhinac.
Waxaana la filayaa in ay Somalidu ku rogaal celin doonto dhibaatada ay gaysatay Borantu, waxaana suurto gal ah in ay dagaaladu balaadhaan ayna gaadhaan meel aan wax laga qaban karin.
Somalida iyo Oromada ayaa waxaa had iyo goorba dhexmara dagaalo ku saabsan dhinaca daaqsinta iyo degaan riixasho dhexmara dadka reer miyiga, xukuumada Itobiyana way yar tahay gacanta ay ka gaysato.